Uthembisa indebe ngesizini ezayo
UMQEQESHI we-Orlando Pirates uMilutin Sredojevic unethemba lokuthi bazosiwina isicoco se-Absa Premiership ngesizini ezayo
LUNGILE MAJOKA | May 13, 2019
UTHEMBISA indebe ngesizini ezayo umqeqeshi we-Orlando Pirates uMilutin “Micho” Sredojevic.
I-Pirates iphunyukwe isicoco se-Absa Premiership ngempelasonto phezu kokubhaxabula iPolokwane City ngo 3-0 e-Orlando Stadium emdlalweni wokugcina weligi.
Okubhimbise imibhiyozo yeZimnyama, yiMamelodi Sundowns ethole igoli idla iFree State Stars eGoble Park, yasivikela kanjalo isicoco.
Yisizini yesibili kaSredojevic kwiPirates futhi kungokwebisili eqeda ngemuva kweSundowns. Okwesibili iPirates inganqobi lutho ngaphansi kwakhe phezu kokunconywa ngokudlala ingcwenga yebhola.
Ukuhluleka wukudla isicoco seligi kuqhube isomiso sezindebe kweZimnyama osekuphele amasizini ayisikhombisa zingayinqobi iligi kanti zagcina eyomkhumulajezi ngeNedbank Cup ka-2014.
UMicho uthe kule minyaka emibili balokhu besondela empumelelweni, ngakho ngesizini ezayo kuzomele kube khona abakutholayo.
“Siyazigqaja ngokuthi silokhu sisondela (empumelelweni) kodwa futhi akumnandi. Kusifundisa ukuthi kumele siziphushe ngokudlulele ngoba eqenjini elikhulu kangaka kumele umqhudelwano ngamunye oya kuwona uzibeke ethubeni lokuyinqoba leyo ndebe, asinqobanga lutho. Kodwa singasho ukuthi sizibekele isisekelo esiqinile sokuthi sisebenzele kusona.
“Siyaziqhenya ngokuthi eminyakeni emibili sihlulwe imidlalo eyisishiyagalombili kwiligi. Ngaphambi kokuthi sifike sasihlulwe emidlalweni ewu-20 kumasizini amabili. Sisalambele okungaphezulu. Silinyusile izinga kodwa alikho phezulu ngokwanele. Lokhu kumele kusikhuthaze sonke, abaphathi, abalandeli, abaxhasi nabadlali ukuthi sibheke isizini entsha ezoba ngengcono,” kusho uSredojevic.
Ukhale kakhulu ngokudlala ngokulingana amahlandla awu-12 kwiligi kule sizini.
“Kubi ukwazi ukuthi sihlulwe emidlalweni emithathu, sadlala ewu-12 ngokulingana. Imidlalo ewu-12 ngeminingi kakhulu uma ubheka izinga leligi yethu.
“Kufana nokuthi besilokhu silunguza, manje sesibonile ukuthi izindebe zikhona. Kumele siye esigabeni esilandelayo,” kusho lo mqeqeshi odabuka eSerbia.
Akakhohlwanga ukuhalalisela uPitso Mosimane neqembu lakhe ngokudla isicoco seligi.
“Njengomqeqeshi nembangi ngibongela umqeqeshi uPitso nethimba lakhe, uDenis Onyango obe nesizini enhle, ukaputeni uHlompho Kekana nabadlali bonke, ngokuthola amaphuzu awu-59 esingazange sikwazi ukuwathola,” kusho uMicho.